Izaziso zentengiso: zeziphi iingqikelelo kunye neempawu zazo | Abadali be-Intanethi
UNerea Morcillo | | ngokubanzi, Ezahlukeneyo
Thina njengoluntu besisoloko siphila kuthotho lweengcamango ezisoloko zisiphawula ukuza kuthi ga ngoku. Abanye babo baye bagqalwa njengobufanasini, abanye bathiya abantu abathandana nabantu abathandana nabo, banobuhlanga okanye ngayo nayiphi na enye into embi. Yiyo loo nto ezi stereotypes bezisoloko zidityaniswa neendaba zentengiso ngokunjalo.
Yiyo loo nto kule post, Size kuthetha nawe malunga nezi stereotypes kunye nendlela ezibe nefuthe ngayo ngandlela thile okanye enye kwicandelo lezentengiso. Ukongeza, siya kukuchazela ukuba yeyiphi i-stereotypes echaphazelekayo kakhulu kwiintengiso zeendaba kunye nendlela iintengiso ezivelise ngayo iingcamango ezininzi kunye nemibuzo kubabukeli.
1 Iingcinga ezizizo
1.1.2 iindima eziyintsomi
1.1.3 Iingxabano zasekuhlaleni
2 Iindidi zeentengiso ezizicingelayo
2.1 Ukutolikwa komfanekiso wesilisa njengowona unamandla kwaye unamandla
2.2 Indima yomntu kunye noomatshini
2.3 Abasetyhini, iintengiso kunye neemoto
2.4 "Ibhola yenkwenkwe kunye nekhitshi yentombazana"
3 Iindima ezahlukeneyo
3.3 Abakwishumi elivisayo
Ngaphambi kokungena kwihlabathi leentengiso, sifuna ukugxininisa igama stereotype.
Ngokutsho kwesichazi-magama, eli gama libhekisa ku kumfanekiso okanye ingcamango efana neqhelekileyo kwaye yamkelwe liqela elithile lentlalontle. Le mifanekiso ilawulwa zezinye izinto zendalo yoluntu, ezifana nobudala, isini, inkangeleko yomzimba womntu, inkolo ekuyo, njl.
Ngamafutshane, Zidla ngokuba yimiba echaphazela kakubi uluntu esiphila kulo. Enyanisweni, zigqalwa njengeenkalo ezingakhiyo ngenxa yokuba zizaliswe lucalucalulo ngabanye abantu.
Umzekelo okhawulezayo we-stereotype yentengiso iya kuba kukusetyenziswa komntu obhinqileyo kwisinxibo sangaphantsi apho kujongwe ukutsala umdla wombukeli kwaye umyalezo ungaqatshelwa. Yindlela yokwabelana ngesondo kwabasetyhini kunye nokumela umfanekiso ongafanelekanga kakhulu kumyalezo ojoliswe ngokwenene ukuba udluliselwe.
Ii-stereotypes azincedi kuphela ukuba imveliso ithengiswe ngendlela ecacileyo nethe ngqo, kodwa zikusondeza kuluntu oza kuluthetha ngalo lonke ixesha.
Ingxaki ngolu bandlululo kukuba ludla ngokudala iindima ebantwini abangekhoyo. Yaye oku akukuphela kwengxaki, kuba abantu abaninzi basenokungazamkeli. Ingxaki kukuba zisemgangathweni, oku kwenzeka xa ipateni efanayo yokuqonda iphindwa kaninzi kwaye ke ngoko, umyalezo owodwa wenziwa othathwa njengento enengqondo neqhelekileyo.
Ngokomzekelo, umbala ohlaza okwesibhakabhaka ubusoloko unxulunyaniswa namakhwenkwe kunye nombala opinki kunye namantombazana.Enyanisweni, ukuba sikhangela i-Intanethi kwinto esidibanisa umbala opinki okanye omfusa, igama livela kwangoko. ubufazi.
Iingcinga ezizizo badala iingxabano zentlalo ngenxa yokungaqondi kakuhle komyalezo oye wafunwa ukuba udluliselwe ukusuka ekuqaleni. Iintengiso ezininzi kuye kwafuneka zaliwe ngenxa ye-buzz ephezulu eziye zavelisa kumajelo amaninzi e-intanethi.
Ngamafutshane, ii-stereotypes bezisoloko zijongwa njengemiba engalunganga ethi, ngaphaya kokubetha kunye nokutsala umdla, ikwazile ukuseka iipatheni ezigwenxa kuluntu lwethu.
Okulandelayo, siya kuchaza ngakumbi malunga nezi stereotypes kwaye siza kukubonisa eyona mizekelo imele kakhulu kwihlabathi likamabonwakude kunye neentengiso.
Iindidi zeentengiso ezizicingelayo
Umthombo: Iphephandaba leNtengiso
Ukutolikwa komfanekiso wesilisa njengowona unamandla kwaye unamandla
Kwiintengiso ezininzi, umntu oyindoda usoloko esetyenziselwa ukutolika nokumnxibisa njengeqhawe elibalaseleyo, elihlaziywe ngezihlunu namandla. Ukongezelela, iingubo eziluhlaza okwesibhakabhaka azizange ziswele, umbala oye, njengoko uchazwe ngasentla, uhlala udibene namadoda.
Ukongezelela, akuyimfuneko ukungena kwihlabathi lama-superheroes ukubonisa omnye umzekelo, kwiifilimu ezininzi umzobo womntu nguye kuphela onokuqhuba amashishini kwaye afezekise iinjongo zabo. Omnye umba oye wavelisa impembelelo enkulu.
Indima yomntu kunye noomatshini
Ukuba siqhubeka sithetha ngomfanekiso wendoda, sifikelela kwisigqibo sokuba indoda, njengengcamango yentengiso, isoloko ifakwe njengomdlalo we-Mario Bros, umlingiswa ohlangula inkosazana ekubandezelekeni.
Ukongezelela, kuninzi lweentengiso ezithetha ngeteknoloji okanye izixhobo zokwakha, umlingisi oyintloko okanye umntu oyintloko wesikhangiso yindoda. Kunqabile ukuba sibone umntu obhinqileyo ephethe isando, Ngaphandle koko, kwiintengiso kunye nakuluntu, lo mfanekiso uhlala uthathwa njengento engafanelekanga ngokwesini.
Abasetyhini, iintengiso kunye neemoto
Kuyinyani ukuba okwangoku, iinkampani ezininzi zeemoto ezinjenge-Audi okanye iCupra zisebenzise amanani abasetyhini kwiintengiso zabo okanye amabala. Kodwa ukuba sijonga ngasemva, "isiqhelo" kwiinkampani ezininzi yayikukusebenzisa umzobo wendoda eqhuba inqwelo-mafutha ephezulu kwindawo enentaba ngesantya esiphezulu.
Namhlanje le ndima iyaziwa kancinci kuneyangaphambili. Ngokomzekelo, i-Cupra isebenzise umfanekiso we-Alexia, umdlali we-FC Barcelona, ​​​​njengomfanekiso oyintloko wendawo.
"Ibhola yenkwenkwe kunye nekhitshi yentombazana"
Khawucinge ngemeko enjengale: ixesha leKrisimesi kunye nesidlo sakusihlwa sosapho, lixesha lokusasaza izipho kunye ... mangala! ukongamela ngelixa ulungiselela isidlo sakusasa.
Kwaye unokuzibuza ukuba le meko ingaqhelekanga ibangelwa yintoni, kuba impendulo ilele kwintengiso, iintengiso zinoxanduva lokudibanisa ukuba inkwenkwe kufuneka ibe ngumdlali webhola ekhatywayo kwaye intombazana kufuneka ibe ngumfazi wekhaya olungileyo. Kwakhona, qiniseka ukuba ikhitshi lipinki kwaye iibhutsi zebhola zebhola zabantwana zibhlowu. Zonke ezi mpazamo kunye neendima eziyintsomi eziye zayilwa ziintengiso zenze ukuba zibe yinxalenye yoluntu lwethu namhlanje.
Ngoko ke, ngokubanzi, akuyi kuba ukudibanisa nawuphi na umbala kwisini esithile, kunye nawo nawuphi na umdlalo kunye nawuphi na umsebenzi onxulumene nekhaya.
Kukho iingcamango ezininzi eziye zadalwa yintengiso kwiminyaka edlulileyo. Kodwa ezi bezisoloko zezona zixhaphakileyo.
Umthombo: The Defined
Umfazi kwintengiso uhlala echazwa njengomntu obuthathaka kwaye othobekileyo oye kwafuneka aphile nabalinganiswa abanje: umama wekhaya, inkosikazi okanye umama, ukuba usebenza phesheya ngunobhala, umongikazi okanye igqwetha. Kwiintengiso ezininzi, kuboniswa ukuthengisa iimveliso zobuhle ezifana ne-lipstick okanye i-eye shadow, okanye iimveliso zasekhaya: isicoci seglasi, njl.
Ngamanye amaxesha, kuye kwaba yimveliso yobuhle okanye umnqweno wokutsala umdla wombukeli. Oku kwenzeka kwiintengiso zempahla yangaphantsi yabasetyhini, apho eyona njongo iphambili ingeyiyo ingubo yangaphantsi, kodwa ngumzimba wemodeli. Kodwa ukuba sijonga iindaba zanamhlanje, intengiso igcine iindima ezifanayo kodwa ingcamango yowesifazane obalaseleyo isetyenziswe kuyo. Ibhinqa elinamandla elilungele ukusingatha imisebenzi yasekhaya kunye nokunyamekela umntwana.
Ngelishwa, ucalucalulo kwintengiso yentengiso luyaqhubeka nokubambela. Umgca oye ulunge ngakumbi kwaye unqumla izikrini ezininzi kwaye ngoko ke, ungquzulwano oluninzi lwentlalo luyenziwa.
Indoda iphinde izaliswe ziindima ezingekhoyo. Kwintengiso okanye nakwibala lemiboniso bhanyabhanya, umzobo oyindoda usoloko ebonisa ubundlongondlongo obuthile, ukuziphatha okubalaseleyo, ukuzinza, amandla kunye namandla.
Okwangoku, umzobo wendoda uthathwa njengento kwiintengiso ezininzi. Apho kuphathelele ukuphakamisa nokunika ixabiso elingakumbi kwinkangeleko yokwenyama kunokuba oko ngokwenene kusemva kwesigidimi. Ngokungathandabuzekiyo, zombini ezi ndidi kuye kwafuneka zijongane nokucalucalulwa okuninzi okungachanekanga kwaye ngelishwa kungokunje kubekwe phambili kakhulu.
Nanini na sinikwa igama lokufikisa, iingqondo zethu zicinga ngeseti ye abantu abaphawuleka ebutsheni babo, abangazithembanga kwaye, ngenxa yoko, bagqalwa njengabantu abangazinzanga.. Kodwa ayisiyiyo yonke into embi, iintengiso zikwalawula ukubanceda ngokubabeka phambili ukuba bangabantu abazimeleyo.
Kwintsimi yentengiso, ulutsha luye lwahlala lusetyenziswa njengeqela lentlalontle elizingcayo, elikwaziyo ukucinga ngokwabo kwaye singqongwe ziingcinga ezidibene namatheko, ukusetyenziswa kweziyobisi okanye ukusetyenziswa kakubi kweteknoloji.
Ngaphandle kwamathandabuzo enye indima eshiye iingxabano ezininzi.
Njengoko sihlalutye, ukukhangisa kuye kwayila indima enye, ukudibanisa imiba yentlalo efana nesini, ubudala okanye inkolo kwaye idibanise ukudala iipatheni ezingalunganga ngokupheleleyo. Ngethamsanqa, uninzi lwentengiso esiyibonayo namhlanje ihambile kule miba yokwabelana ngesini kakhulu. Ke akukho nto ilunge ngakumbi ukukwazi ukubona iintengiso ngaphandle kwesidingo sokuvelisa ungquzulwano.
Siyathemba ukuba ufunde ngakumbi malunga "necala elimnyama" lentengiso kwaye uqhubeke nokukhangela uninzi lweengcinga ezinomdla ngakumbi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » intengiso stereotypes